ကက်လ်တစ်ဒဏ္ဍာရီ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကက်လ်တစ်ဒဏ္ဍာရီ (အင်္ဂလိပ်: Celtic mythology) သည် သံခေတ်ကာလမှ ကက်လ်တ်လူမျိုး (ဆက်လ်တ်) တို့၏ နတ်များစွာကိုးကွယ်သော အယူဝါဒနှင့်ပတ်သက်သည့် ဒဏ္ဍာရီဖြစ်သည်။ အခြားသံခေတ်ကာလမှ ဥရောပသားများနည်းတူ အစောပိုင်း ကက်လ်တ်လူမျိုးတို့သည် ဘာသာရေးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့် နတ်များစွာကိုးကွယ်သည့် အယူဝါဒတို့ကို ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြသည်။ ရှေးခေတ်ရောမယဉ်ကျေးမှုနှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်ဆံထိတွေ့မှုရှိသည့် ဤလူမျိုးများ ဥပမာအားဖြင့် ဂေါလ်ဒေသရှိ ကက်လ်တ်များနှင့် အိုင်ဘဲရီးယားကျွန်ဆွယ်နေ ကက်လ်တ်တို့အဖို့ ၎င်းတို့၏ ဒဏ္ဍာရီသည် ရောမအင်ပါယာတွင် ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ ထို့နောက်ပိုင်း ခရစ်ယာန်အယူသို့ပြောင်းလဲခြင်းများရှိခဲ့ကာ ၎င်းတို့၏ ကက်လ်တ်ဘာသာစကားများ ပျောက်ကွယ်မှုလည်းရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ ဒဏ္ဍာရီများကို ထိန်းသိမ်းခဲ့ရာ၌ အများစုမှာ ခေတ်ပြိုင်ရောမရင်းမြစ်စာပေများနှင့် ခရစ်ယာန်ရင်းမြစ်စာပေ တို့ဖြစ်ကြသည်။ အိုင်ယာလန်နှင့် စကော့တလန်ရှိ ဂေးလ်လူမျိုးများ၊ ဝက်လ်ရှ်ပြည် (ဝေလ) ရှိ ဝက်လ်ရှ်လူမျိုးများ၊ ဘရစ်တနီဒေသနှင့် တောင်ပိုင်း ဂရိတ်ဘရစ်တန် (ဂရိတ်ဗြိတိန်) ဒေသရှိ ကက်လ်တ် ဘရစ်တန်များ စသည်တို့ကဲ့သို့သော နိုင်ငံရေး သို့မဟုတ် ဘာသာစကား လက္ခဏာများကို ထိန်းသိမ်းခဲ့သော ကက်လ်တ်လူမျိုးတို့သည် ၎င်းတို့ရှေးဘိုးဘေးတို့၏ ဒဏ္ဍာရီများနှင့်ပတ်သက်သော အနည်းငယ်မျှသာရှိသည့် အကြွင်းအကျံများကို ထားနိုင်ခဲ့ကြကာ ထိုဒဏ္ဍာရီများကို အလယ်ခေတ်ကာလများ၌ စာအဖြစ်ရေးသားခဲ့ကြသည်။
အမြင့်ဆုံးအနေအထား၌ ကက်လ်တ်တို့၏ ကမ္ဘာသည် ဥရောပအလယ်ပိုင်း၊ အနောက်ပိုင်းများစွာကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သော်လည်း နိုင်ငံရေးသဘောအရ တစ်ညီတညွတ်တည်း မတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သလို ယဉ်ကျေးမှု လွှမ်းမိုးခြင်း (သို့) ယဉ်ကျေးမှု တစ်သားတည်းဖြစ်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်သည့် ခိုင်မာသော အဓိကရင်းမြစ်များလည်း မရှိပေ။ အကျိုးဆက်အဖြစ် ကက်လ်တ်ဘာသာတရားတွင် ဒေသတွင်း အယူကျင့်သုံးမှုအမျိုးမျိုး များစွာကွဲပြားလျက် ရှိသည်။ နတ်အမျိုးပေါင်း သုံးရာကျော်နှင့် ပတ်သက်သည့် ထွင်းထုမှုများက ပြိုင်ဘက် ရောမဒဏ္ဍာရီလာနတ်များနှင့်ညီကာ ပို၍ကြာရှည်စွာ တည်ရှိကြသည်။ သို့ရာတွင် ထိုနတ်အများစုမှာ genii locorum ဟုခေါ်သော ဒေသ၊ မျိုးနွယ်စုနတ် (မြန်မာလို မြို့စောင့်နတ်၊ နယ်စောင့်နတ်) များသာဖြစ်၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကိုးကွယ်မှု မရှိသလောက်ပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ရှင်သန်ကျန်ရစ်သော ကက်လ်တ်ဒဏ္ဍာရီမှနေ၍ အချို့သောအကြောင်းအချက်များကို သိမြင်နားလည်နိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ယုံကြည်လက်ခံထားသောပုံစံထက် ပို၍တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်းရှိသော နတ်များစွာကိုးကွယ်သည့်အယူကို အရိပ်အမြွက်ပြဆိုသည့် (မျှဝေသုံးစွဲထားသော) သဘောလက္ခဏာများကို သိမြင်နိုင်သည်။
ထိုရှေးနတ်များ၏ သဘာဝနှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များကို ၎င်းတို့၏ အမည်၊ ကျောက်စာ/ထွင်းစာများ၏ တည်နေရာ၊ အနုပညာလက်ရာများတွင် သုံးထားသော ပုံရိပ်များ၊ ၎င်းတို့နှင့် ညီမျှသော ရောမဒဏ္ဍာရီလာ နတ်များ၊ နောက်ပိုင်း ကက်လ်တ်ဒဏ္ဍာရီမှ အလားတူပုဂ္ဂိုလ်များ စသည်တို့မှနေ၍ ကောက်ချက်ချသုံးသပ်နိုင်သည်။
ကက်လ်တ်ဒဏ္ဍာရီကို များစွာသောထင်ရှားသည့် သက်ဆိုင်ရာ ကက်လ်တ်ဘာသာစကားအုပ်စုများတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။
တာရန်နစ်နတ်ဘုရားအား ကိုးကွယ်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သည်ဟု ယူဆနိုင်သော ကက်လ်တ်တို့၏ ပူဇော်တင်လှူသော ဘီးလုံးများ။ ဂေါလီယာ ဘယ်လ်ဂျီကာဒေသရှိ မြင့်မြတ်သောအဆောက်အဦများ၌ ဤဘီးလုံးထောင်ပေါင်းများကို တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဘီစီ ၅၀ မှ အေဒီ ၅၀အထိ သက်တမ်းရှိသည်။ ပြင်သစ် ရှေးဟောင်းသုတေသန အမျိုးသားပြတိုက်
ဂေါလစ်ရှ်ဘာသာစကားဖြင့် ရေးသား သယ်ဆောင်ထားသော ရှင်သန်ကျန်ရစ်သည့်စာပေများ ရှားပါးခြင်း ရလဒ်အဖြစ် ကက်လ်တစ်အရေးအသားအများစုကို ရောမတို့က ဖျက်ဆီးခဲ့သည်ဟု မှန်းဆနိုင်သည်။ သို့သော် ဂေါလ်လစ်ရှ် အရေးပုံစံသည် ဂရိ၊ လက်တင် အက္ခရာများကို သုံးစွဲ၍ မြောက်အစ်တဲလစ် အက္ခရာကိုလည်း အသုံးပြုမှုရှိသည် (သက်သေအရ အုတ်ခွက်၊ မြေခွက်ကဲ့သို့သော ထွင်းထုသည့်အရာများနှင့် ကောလစ်ဂ်နီပြက္ခဒိန်တွင် သုံးစွဲသည်)။ ဂျူးလိယက်ဆီဇာက ဂေါလ်လူမျိုးများ၏ စာတတ်နှုန်းကို သက်သေထင်ရှားပြခဲ့၍ ဤသို့လည်းရေးသားခဲ့သည်။ ဘာသာရေးနှင့်ဆိုင်သော အရေးပါမှုများအကြောင်း စာပိုဒ်များ မှတ်တမ်းပြုရန် ထိုဘာသာရေးဆရာများကို စာရေးသားခြင်း အသုံးပြမှုကို ပိတ်ပင်ထားသည် ဟူ၍ဖြစ်သည်။
ရောမသည် အများပြည်သူဆိုင်ရာ ထွင်းထုရေးသားမှုများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ကာ ၎င်းတို့သိမ်းယူထားသောဒေသများတွင် ဒရူးယစ်ဟုခေါ်သော ဘာသာရေးဆရာ(ဘုန်းကြီး)များ၏ စွမ်းအားကို ချိုးနှိမ်ခဲ့သည်။ နတ်များအကြောင်းပါရှိသော ထိုထွင်းထုမှုအများစုကို ဂေါလ်ဒေသ (ခေတ်သစ် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ အီတလီမြောက်ပိုင်း)၊ ရောမ ဗြိတိန်၊ အခြားသော ရောမသိမ်းထားသည့် ကက်လ်တစ်စကားပြောဒေသများ တွင် တွေ့ရှိရသည်။
အိုင်ယာလန်နှင့် လက်ရှိ ဝေလပြည်၏ အစိတ်အပိုင်းများရှိ အစောပိုင်း ဂေါလ်လူမျိုးများသည် အောဂမ်(Ogham) အက္ခရာအရေးအသားကိုသုံးကာ ထွင်းထုမှုအတိုများကို မှတ်တမ်းတင်ကြသော်လည်း ခရစ်ယာန်ဘာသာ ပေါ်ထွက်လာသည့်ခေတ်မတိုင်မခြင်း ရောမတို့ မသိမ်းယူထားသည့် ဒေသများတွင် ပို၍ ခေတ်မီတိုးတက်သော စာရေးသား/ဖတ်နိုင်ခြင်းများကို မိတ်ဆက်မှု မပြုနိုင်ခဲ့ချေ။ အမှန်ဆိုလျှင် များပြားသော ဂေါလစ်ဒဏ္ဍာရီများကို မူရင်းဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဓိပ္ပာယ်များ မပါရှိသော်လည်း ခရစ်ယာန် ဘုန်းတော်ကြီးများက ပထမဆုံး မှတ်တမ်းပြုရေးသားခဲ့ကြသည်။
↑ Ross၊ Anne (1972)။ Everyday Life of the Pagan Celts။ Carousel Books။ pp. 166–167။ ISBN 0-552-54021-8။
↑ Chadwick၊ Nora Kershaw (1970)။ The Celts။ Penguin Books။ p. 149။ ISBN 978-0-14-021211-2။
↑ Ross၊ Anne (1972)။ Everyday Life of the Pagan Celts။ Carousel Books။ pp. 168–170။ ISBN 0-552-54021-8။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကက်လ်တစ်ဒဏ္ဍာရီ&oldid=697756" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။